Channel Myanmar Update ( မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ စုဝေးရာ ): Hugo (2011) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဝတ္ထုက ၂၀ဝ၇ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပါ တယ်။ ပါရီမှာရှိနေတဲ့ ရထားဘူတာရုံမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ကလေးငယ်၊ ဘူတာအတွင်းမှာ ပဟေဠိဆန်စွာရှိနေတဲ့ အရုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒီနှစ်ဦးကြားက အဖြစ်အပျက်ကို ဇာတ်လမ်းဆင်ခဲ့တာပါ။ ဇာတ်လမ်းသဘောထက်
The New Yorker ၊ Time ၊ MTV၊ The Hollywood Reporter ၊ Rolling Stone နှင့် The New York Times တို့က ဒီဇာတ်ကားကို ၂၀၁၁ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်း ဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၃၁ခုနှစ်အချိန်ကို ဇာတ်ကားမှာ နောက်ခံ ပြုခဲ့ပါ တယ်။ ဟူဂိုကားဘတ်ဆိုတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦးက ဘူတာ ရုံအတွင်း နေထိုင်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖခင်က နာရီတီထွင်တဲ့ နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ မီးလောင် မှုကြောင့် သေဆုံးသွားပါတယ်။ တစ်ဦးတည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ တဲ့ ဟူဂိုကို ဦးလေးဖြစ်သူ ကစောင့်ရှောက် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ပြည့် အရက်မူး
နေတဲ့ ဦးလေးက ဟူဂိုကို ကောင်းကောင်း မစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘူတာရုံထဲ ရှိနေတဲ့နာရီကြီးတွေကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာ သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဟူဂိုအတွက်တစ်နေ့တာလုပ်စရာ ဟာ ဘူတာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ နာ ရီကြီးတွေကို သံပတ်ပေး၊ ပျက်နေတာတွေကို ပြင်ရတဲ့ အလုပ်အဖြစ်လာပါတယ်။ နာရီလက်တန် တွေရဲ့နောက်ဘက်ကတစ်ဆင့်
ပြင်ပ ကမ္ဘာကို ထိတွေ့ခွင့်ရလာပါတယ်။ ဘူတာ မျက်နှာကျက်ကနေ အောက်ဆင်းရင်တော့ ခိုးဆင်းရတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဘူတာတွင်း က အလေအလွင့်ကလေးတွေကို လိုက်ဖမ်း နေတဲ့ ရဲသားတစ်ဦးက ခွေးတစ်ကောင်နဲ့အမြဲလို ပတ္တရောင်လှည့်နေခဲ့ပါတယ်။ ဘူ တာကြမ်းပြင်ကို ဆင်းဖို့အတွက် ရဲသားအ လစ်ကို စောင့်နေရသလို အစာစားဖို့အတွက် လည်း ခိုးယူရတာတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနေထိုင်ရင်းက ပဟေဠိဆန်တဲ့ အ ရုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးနဲ့ သိကျွမ်းလာခဲ့ရပါ တယ်။ ကောင်းသော သိကျွမ်းခြင်းတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူလိုချင်တဲ့ ကြွက်ရုပ်ငယ် ကို အကြောင်းပြုပြီး ဖခင်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်ကို ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှတ်စုစာအုပ်ကို ပြန်မပေးတော့ပါဘူး။ ဟူဂိုအတွက် မှတ်စုစာအုပ်က အရေးကြီးနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအ ချက်ကို အခြေပြုပြီး မာတင်စကော့ဆေးဆေးက ဇာတ်ကား ကို စိတ်ဝင်စားအောင် တင်ဆက် သွားခဲ့ပါတယ်။ စကော့ဆေး ဆေးရဲ့ ဖန်တီးမှုအတတ်ပညာကို အထင်အရှားတွေ့ရမယ့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
Credit To : Film2mm.com IMDB 7.5 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားဟာ 2h:6mins ကြာမြင့်ပါတယ်။
Pink (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children(2016) ...
USS Indianapolis: Men of Courage (2016) မြန်မာစာတန...
Short Term 12 (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Thani Oruvan (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Inferno 2016 - မြန်မာစာတန်းထိုး
The Wave (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Jazbaa (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
The Game (1997) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Love Fiction (2012) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Mohenjo Daro (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Tale From Earth Sea (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
Cafe Society (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Secret (2007) - မြန်မာစာတန်းထိုး
BY THE GUN (2014) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Man on High Heels (2014) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Movie 43 (2012) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Next (2007) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Interstellar & Science of Interstellar (2014) မြန်...
Knucklebones(2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
xXx (2002) and (2005) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Helpless (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Infiltrator(2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Ghost Team (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Burma VJ: Reporting fromaClosed Country (2008) -...
The Founding Of A Republic (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး...
India Pakistan (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Daybreakers (2009) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Labor Day (2013) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Death Race (2+3) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Main Tera Hero (2014) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Youth (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Snowden (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Agoraphobia (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Naked Killer (1992) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Primal Fear (1996) - မြန်မာစာတန်းထိုး
London Boulevard (2010) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Shinobi: Heart Under Blade (2005) - မြန်မာစာတန်းထိ...
The Tunnel (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Legend Of Ravaging Dynasties (2016) - မြန်မာစာတန်း...
Kung Fu Hustel (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
Swade (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
Alcoholist (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Apocalypse Pompeii (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
IRIS : Deo mubi(2010) - မြန်မာစာတန်းထိုး
The Monster (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
I.T (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Road to Perdition (2002) မြန်မာစာတန်းထိုး
Girl’s Blood 2014 မြန်မာစာတန်းထိုး ၁၈+
Deadpool (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Iru Mugan (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Naam Hai Akira (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး
The Prestige (2006) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Suicide Squad(2016) – မြန်မာစာတန်းထိုး
Sully (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Fool’s Gold (2008) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Synopsis of My Amazing Boyfriend ( 2016 )
Inside Man (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး